तत्काल ल्याउनुपर्ने नेपाली २० हजार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
उनले दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि बताए । ‘कति मान्छे उद्धार गर्नुपर्छ ? कति ल्याउने हो ? र, मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा ह्वारह्वार्ती मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने, केही गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने र त्यस्तो प्रकार भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैन,’ उनले भने, ‘देशभित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनुपर्‍यो, बाहिर भएकाको पनि समस्या समाधान हुनुपर्‍यो र आउन चाहनेको पनि, जसको जेनुन समस्याको समाधान पनि हुनुपर्‍यो । त्यसकारण सरकार जेनुन समस्याको सम्बोधन गर्नेदेखि देशभित्र नागरिकको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध गरेर सम्बोधन गर्न सरकार स्पष्ट छ । क्रियाशील छ र दृढ छ ।’ प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:५३
बहराइनमा थप ७४ नेपाली संक्रमित
काठमाडौँ — बहराइनमा थप ७४ नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको छन् । योसँगै बहराइनमा संक्रमित हुने नेपालीको संख्या ३३१ जना पुगेको छ । जसमा १७ महिला छन् ।
मनामास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार पछिल्लो एक साताको अवधिमा ७४ जना नेपाली संक्रमित भएका हुन् ।बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको नेपाली कामदारको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको बताए । ‘सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ’, उनले भने ।
बहराइनमा २ लाख ३४ हजार ९ सय ९८ जनाको परीक्षण गरिएकोमध्ये ६ हजार ९ सय ३० जना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये ६ जनाको अवस्था गम्भीर छ । २ हजार ७ सय ७४ जना निको भइसकेका छन् । मृतकको संख्या १२ पुगेको छ । बहराइनले कोभिड परीक्षणका लागि ९ वटा अस्पताल छुट्याएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ २२:१८